“Ibsa Miseensota Hoggantoota ABO Turanii! - Kichuu
[ September 24, 2020 ] Dubbii Irreechaa Shamsaddin Xahaa dhaddacharrattii Dubbate	News
[ September 24, 2020 ] From Nobel Peace Prize to Uproar in Less Than One Year!!	World
[ September 24, 2020 ] The pp government continued to keep these innocent political prisoners in jail.	News
[ September 23, 2020 ] Soninaf Adem -farda koo-New Ethiopian Oromo music 2020	Musics
[ September 23, 2020 ] Addi Bilisummaa Hilton (Dammallaashonni) paartii amaaraa ABN waliin waliif mallatteesse	News
[ September 23, 2020 ] OMN: (Fulbaana 23, 2020) Birriin Itiyoophiyaa inni haaraa, dogoggora maxxansaa	News
[ September 23, 2020 ] OMN: ቆይታ ከዶር አወል አሎ ጋር (Sept 23, 2020)	TV
[ September 23, 2020 ] Waaqa Kadhadhaafii: Doktoora Kabajaa Artiist Ali Birra	News
[ September 23, 2020 ] Abiy is going global with his war on Oromos!	World
[ September 23, 2020 ] Ethiopian opposition leader says terror charges are politically motivated	World
HomeAfaan OromooNews“Ibsa Miseensota Hoggantoota ABO Turanii!
“Ibsa Miseensota Hoggantoota ABO Turanii!
“Ibsa Miseensota Hoggantoota ABO Turanii
Nu, maqaan keenya gaditti kan tarrifame, ABO keessatti sadarkaa Koree Hujii Raawwachiiftuu fi Koree Gidduutti hoggnatota kan turree fi yeroo ammaa biyyoota ambaa keeessa jiraanuu, haalli yeroo ammaa ummanni fi biyyi keenya keessa jiran hedduu nu yaachisee walgahii godhannee jirra. Haala ummataa fi biyya keenyaa irratti bal’inaan erga mari’anne booda hubannoo waloo fi murtiilee asii gadii irra geenyee jirra.
1. Mootummaa Itophiyaa kan MM Dr. Abiyi Ahmediin hogganamu, kan aangootti dhufe qabsoo hadhooftuu fi wareegama guddaa ummanni Oromoo, keessattuu Qeerroo fi Qarreen Oromoo baasaniin akka tahe beekamaa dha. Oromoon kan qabsoo godhee fi wareegama ulfaataa kaffaleef gaaffileen siyaasaa, diinaggee, hawaasumaa fi aadaa isaa akka deebi argatuufii dha. Faallaa kanaa garuu mootummaan Dr. Abiyi impaayera Itophiyaa dullatti deebisee ijaaruuf tattaafataa akka jiru hubanna. Dr. Abiyi amaanaa itti kenname nyaatee sirna ummanni Oromoo of irraa kaasuuf qabsoo godhe deebisuuf tattaafachu argaa jirra. Mootummaan kun akeeka Impaayara Itoophiyaa jabeessuuf baafate kanaaf humni guddaan dura dhaabbate ummata Oromoo fi qabsaawota Oromoo waan tahaniif, guyyaa irraa guyyaatti diineffachaa, nafxanyaa hamilechiisaa fi jabaadhaa jechaa akka jiru hubannera.
2. Sirna dhabuun guutummaa Itophiyaa keessa: kaabaa – kibba, bahaa- dhiha keessa osoo jiruu, naannoon garii bulchiinsa federaalaaf abboomamuu didanii, sadarkaa walabummaa isaanii labsachuu irra gahanii osoo jiranii, naannoon garii ammoo dirree bahanii lola labsaa osoo jiranii, MM Dr. Abiyi garuu ummata Oromoo Oromiyaa Dhihaa (Wallagga Afran) fi Kibbaa (Gujii fi Boorana) naannawa Oromoyaa biraattis waraana banee, Command Post ijaaruun bittaa waraanaan ummata ajjeessaa, hiraarsaa fi beelessaa jira.
3. Hujiin diinummaa mootummaan kun ummata Oromoo irratti hojjatu, naannoo Command Post itti ijaarratee ummata hiraarsaa jiru qofatti hin dhaabbanne. Mootummaan kun miidhaa fi ajjeechaa barattota Oromoo dhaabbatoota barnoota ol’aanoo Mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti barachaa turanii fi jiran irra gahaa turee fi gahaa jiruuf quuqamaa fi naatoo tokkoolee dhabuu fi tika barbaachisu gochuu dhabuun isaa, Oromoof dantaa dhabuu irraa akka maddetti hubanne.
4. Seenaa Itoophiyaa keessatti takkaa filmaatni haqaa fi dhugaa deemsifamee hin beeku. Impaayarri filmaata haqaa fi dhugaa deemsisuus hin dandayu. Mootummaan Itophiyaa MM Dr. Abiy Ahmadiin durfamu illeen filmaata dhugaa fi haqaa deemsisa jennee hin abdannu. Mootummaan ammaa kun illeen filmaatotuma dharaa bara bittaa wayyaanee ummata hifachiisan gochuuf deema. Ragaan haala kana mirkeeneessan hedduu dha. Muummicha Minsteraatuu, ”… ani ilma Malas tahuu koo dagachuu hin qabdan; korojoo akka itti garagalfamus [hatamus] bareecheen beeka” jedhe ragaa ofitti bahee jira. Filmaatni ji’oota muraasa booda tahuuf jiru akka bilisaa fi haqa hin taane tarfaanfiilee danqan fudhachuu jalqabuu ammayyuu argaa jirra.
Hubanoota asii olii fi marii bal’aa geggeessine irraa ka’uun, murtiilee (resolutoins) fi gaaffiilee (demands) asii gadii dabarsinee jirra:
1. Waraana Mootummaan Muummicha Minsteeraa Dr. Abiyyiin geeggafamu ummata Oromoo Oromiyaa Dhihaa (Wallaga), Oromiyaa Kibbaa (Gujii fi Boorana) fi ummata Oromoo naannoo biraa irratti geggeessuu jabeessinee balaaleffanna. Lolli ummata Oromoo irratti deemaa jiru dhaabatee karaa nagaa furmaata akka argatu gaafanna. Rakkoo siyaasaatif warannii furmaata akka hin fidne, yaadachiisuu barbaanna.
2. Mootummaan MM Dr. Abiyyiin geeggafamu waraana ummata irratti labse hattatmaan akka dhaabu, Command Post Waraanaa Oromiyaa Dhihaa (Wallaga), Oromiyaa Kibbaa (Gujii fi Boorana) keessatti ijaaree ummataan ajjeessaa fi dararaa jiru hatattamaan akka diiguu fi waraana ummata keessaa akka baasuu jabeessinee gaafanna. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa gocha farrummaa ummata Oromoo irratti raawwateef akka seeratti dhihaatu gaafanna.
3. Ummanni Oromoo hundi xiqqaa – guddaan, Qeerroo fi Qarreen, qaama ummaticha kan tahan Oromoo dhiiha fi kibba jiran cinaa hiriiruun tumsaa fi deggersa keessan akka kennitan gad jabeessinee gaafanna. Yeroon waliif dirmatan amma!
4. Saamicha lafa Oromoo keessattu naannoo Finfinneetti godhamaa jiru cimsinee balaaleffanna. Shirri Finfinnee fi Naannoo Amaaraa walitti fullaasuuf hojjatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu gaafanna.
5. Nafxanyooti wal ijaaranii ummata Oromoo irraan miidhaa gahaa jiraniif kan itti gaafatamu mootummaa aangoo irra jiru tahuu ibsina. Mootummaan sochii nafxanyoota kana karaa seeraa hin tohatu yoo tahe ummatni Oromoo dirqame tarkaanfii of ittisu fudhachuuf dirqama.
6. Haalli biyyaa fi ummanni keenya keessa jiru, haalli mootummaan abbaa irree biyya keessatti hidda gad itti dhaabachaa jiru qalbifachuun, jaarmayootaa fi ummanni Oromoo haala mudatu malu hundaa dursanii beekuu fi qophaawuu kan gaafatu tahuu yaadachiifna.
7. Gama keenyaan illee dirqama lammumaa nu irra jiru raawwachuu fi ummata keenya bira dhaabachuuf mariin keenya kan itti fufuu fi waan dandeenyu hundaan ummata keenya bira dhaabbachuuf murteessinee jira.
Ammajjii (January) 18, 2020
Warri Marii irratti argamne
1. Bultum Biyyoo
2. Qaxalee Waaqjiraa
3. Tamaam Yusuf
4. Abbaa Caalaa Lataa
5. Rooraas A/Goobaa
6. Quubsaa Sabaa
7. Dr. Bayaan H. Asoobaa
8. Dr. Dagafaa Abdiisaa
9. Bultum Weebilee
10. Gugusaa Galmoo
11. Sheek Xaliilessa Qumbii
12. Dhugoomsaa Dhugaas
Sirna baniinsa waajjira ABO magaalaa walisoo
Oromoon Filannoo moo hidhannootiin abbaa biyyaa ta’uu barbaadaa ??
8.4 million people in need of humanitarian assistance in Ethiopia
Addisu Karrayyuu Hogannaa A.B.O. Jaal DAWUD IBSAA. Sep 2020